Ciidanka ammaanka oo lagu weerarey buleer. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ciiddii habeenkii sannadka cusub ee barxadda Möllevångstorget ee magaalada Malmö. sawir: Johan Nilsson/TT
Hög polisnärvaro under nyårsfirandet på Möllevångstorget i Malmö.
Ciidanka ammaanka oo ku sugan barxadda Möllevångstorget ee magaalada Malmö. sawir: Johan Nilsson/TT
Ciidanka ammaanka oo lagu weerarey buleer.
La cusbooneeyay tisdag 2 januari kl 11.05
La daabacay tisdag 2 januari kl 10.47
Xafladihii habeen-nimadii ciidda sannaedka cusub 2018 ayey khalalaaso ka dhaceen goobo dalka ka mid ah. Kolka laga yimaado sakhradda iyo dagaallada ayaa sidoo kale tacadiyo loogu geeystey bulaleryo (rashado) lagu weerarey bulshada, howl-wadeennada ciidanka ammaanka iyo dhismooyin.
Magaalooyinka Hovsjö, Södertälje, ayey dhallin-yaro ku tuureen bulaleyr hooy. Iyaga oo wixii intaa ka horreeyey sidoo kale ku weerarey bulshada iyo ciidanka ammaankaba, sida ay sheegtay Anna Westberg oo ka howl-gasha laanta saxaafadda ciidanka ammaanka ee magaalada Stockholm.
Seyruukhyo lagu riday hogga tareemmada
Xaafadda Husby oo dhacda galbeedka magaalada Stockholm ayaa ciidanka ammaanka oo goobta u tagey qaylo dhaan (alarm) la xiriirtay dab ka kacay barando guri lagu weerarey seyruukh. Hase yeeshee dabkii halkaa lagu damiyey, inkastoo muddadii howsha lagu guda jirey ey dhallin-yaro wejiyada soo qarsatey ku weerareyeen seeyruukhyo.
Isla fiid-nimadii habeenkaa ayaa ciidanka amaanka qeylo dhaan looga yeertay xarunta godka tareemmada ee xaafadda Hjulsta oo dhacda galbeedka magaalada Stockholm, middaasina oo ka dambeeysay dhallin-yaro seeyruukhyo ku riddey gudaha godka tareemmada.
Magaalada Linköping ayaa lagu garaacay shakhsi iyadoo dabadeed lagu weerarey seeyruukh, kadib kolkii uu dhallin-yaro ka codsaday iney joojiyaan guryaha ey seeyruukhyada ku rideyaan.
Magaalada Malmö ayay ka imaneyaan warar sheegaya in seeyruukhyo lagu riday tareen ku sugnaa maxaddada tareemmada ee Oxie.
Inta badan waxaa gobolka Skåne ka dhacay dhacdooyin la xiriira weerarro loo adeegsaday seeyruukhyo habeenkii ciidda ee sannadka cusub 2018. Ciidanka ammaanka ayey soo gaareen qeeyla dhaanno la xiriira qaraxyo iyo qiiq ka ka baxayey jaranjarooyinka hooyada iyo kuwo laga arkayey daaqadaha, hase yeeshee aan lagu soo warramin jir-dillo xooggan.
Magaalada Kristianstad ayey ka dhaceen dabab, halka dhanka kale dhagxaan iyo seeyruukhyo lagu weerarey ciidanka ammaanka oo goobta ku sugnaa, hase yeeshee gadaal ay xaaladdu ka deggenayd.
Magaalada Växjö ayuu alaarm ka kacay goob ganacsi kolkii lagu riday seeyruukhyo.
Sidoo kale goobo ka mid ah magaalada Västervik ayay qeylo dhaan ka soo gaartay ciidanka ammaanka, halkaasina oo ey dhallin-yaro ku rideeysay seeyruukhyo dadyoow waddooyinka marayey.